China Matipi echokwadi epurasitiki zvikamu dhizaini uye kuumba Mugadziri uye mutengesi | Mestech
Nemazvo epurasitiki zvikamu dhizaini uye jekiseni kuumbwa Inofanira kutanga mune zvigadzirwa, zvikamu dhizaini dhizaini, dhizaini dhizaini uye kugadzira, jekiseni kuumbwa muchina, hunyanzvi mashandiro uye yakanaka yekugadzira nharaunda.
With kukura ano indasitiri, kune zvakawanda uye kwazvo epurasitiki zvinhu. Panguva imwecheteyo, zvigadzirwa zvepurasitiki zvinoshandiswawo zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana siyana. Kunyanya, anowedzera uye chaiwo epurasitiki zvikamu zvinoshandiswa. Iye zvino ngatigoveranei nemi iwo matipi ezve chaiwo epurasitiki zvikamu dhizaini uye kuumbwa.
1. Dhizaini yezvakanaka zvikamu zvepurasitiki
(1) Mhando dzakasiyana dzemapurasitiki chaiwo
A. Yakakwirira-dimensional kurongeka zvikamu, senge: mota magiya, honye magiya, screws, mabheyaringi. Idzi zvikamu chaizvo zvinowanzo shandiswa mune chaiyo yekufambisa michina yemuchina (senge maprinta, makamera, otomatiki vacuum cleaners, marobhoti, smart zvishandiso, madiki maUAV, nezvimwewo). Zvinoda kufambiswa chaiko, kufamba mushe, kugadzikana uye kurira-kusununguka.
B. matete-akakomberedzwa zvikamu:
Kazhinji, madziro epurasitiki matunhu ari mashoma pane 1.00mm, inova yeakaonda-akapoteredzwa zvikamu. Mativi matete-akasimba anogona kuita kuti saizi yechigadzirwa ive diki kwazvo. Asi mapurasitiki matete-akakomberedzwa zvikamu haatombo zadzwa nekuda kwekukurumidza kutonhora uye kuomarara. Uye matete matete-mativi haakwanise kumira nesimba refa uye kutyora mufa mhango. Naizvozvo, dhizaini yezvikamu zvakatetepa-zvine rusvingo zvinofanirwa kusarudza zvinhu zvine nani mega zvivakwa. Uye zvine musoro dhizaini, senge yunifomu yemadziro ukobvu, zvikamu hazvigone kuve zvakare madziro. Yakadzika kufa, yakakura kona. Kune mamwe akanyanya-matete mativi, akakwira-inomhanya jekiseni kuumbwa muchina unodiwa.
C. Optical zvikamu:
Optical zvikamu zvinoda kutapira kwakanaka / kupenya kupenya mashandiro, pamwe neakanaka mativi kugadzikana uye kupfeka kuramba. Semuenzaniso, iyo yepamusoro curvature ye concave uye convex lenses inoshandiswa mumaprojekita inoda kukwirisa uye kugadzikana. Yakakwirira yakajeka epurasitiki yakadai se PMMA inodiwa. Panguva imwecheteyo, zvimwe zvinovhenekera zvikamu zvemaziso zvinodawo kuita mitsara yakanaka pamusoro pezvikamu kuti igamuchire mwenje kana kutopenya kana kubvisa kupenya.
D. Yakakwirira-kubwinya pamusoro:
Yakakwira-gloss zvikamu zvinosanganisira Optical zvikamu, pamwe nezvimwe zvikamu zvinoda yakakwira pamusoro pekupedzisira (girazi pamusoro). Rudzi urwu rwezvikamu zvinoshandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa zvemagetsi zvevatengi, senge nharembozha. Dhizaini yerudzi urwu rwezvigadzirwa inofanirwa kufunga nezve epurasitiki zvigadzirwa zvine zvakanaka fluidity, ukobvu dhizaini uye kufa tekinoroji.
E. zvikamu zvepurasitiki zvisina mvura
Zvizhinji zvemagetsi nemagetsi zvigadzirwa zvinoda mvura-chiratidzo, senge isina magirazi magirazi / wachi / emagetsi emauto, zvigadzirwa zvekunze uye zviridzwa zvine hunyoro mvura nharaunda. Huru nzira dzekudzivirira mvura idzo dzakavharidzirwa zvisimbiso pamusoro pekunze kwechigadzirwa, senge makiyi akavharirwa, jacks dzakakomberedzwa, kuvhara mapena, kusimbisa kweiyo ultrasonic, nezvimwe.
F.IMD / IML (mu-muforoma-kushongedza, mune-chakuumba-chitaridzi)
Maitiro aya kuisa iyo PET firimu mujekiseni muforoma mhango uye kusanganisa iyo jekiseni zvikamu kuita yakazara yekugadzira tekinoroji, iyo inonamira yakasimba kune epurasitiki mativi. IMD / IML zvigadzirwa zvigadzirwa: kujekesa kwepamusoro, stereoscopic, haina kupera; pachena kwema lenzi ewindows zvakakwirira se92%; Kupfeka-kusagadzikana uye kukwenya-kusagadzikana pamusoro pehupenyu hwakareba hwebasa; Buoyancy yezvakakosha zvigadzirwa panguva yejekiseni kuumbwa, hupenyu hwakakosha hunogona kusvika kanopfuura miriyoni imwe nguva.
Yakatetepa pamadziro epurasitiki chikamu
IMD / IML mapurasitiki epaneru
Izvo zvikamu zvepurasitiki
Optical chikamu / yakajeka chivharo
Double jekiseni isapinda kesi
Nyaya chaiyo yezvigadzirwa zvemagetsi
Dzimba dzinotyisa dzechimiro chakaomarara
(2) Matipi eakajeka epurasitiki zvikamu dhizaini
A. yunifomu yemadziro ukobvu Mujekiseni yekuumba, iyo plastiki iri mune yemvura mamiriro kwenguva pfupi, uye kufanana kweiyo rusvingo ukobvu hwezvikamu kune simba rakakura pakuyerera velocity uye kutungamira kwepurasitiki. Ukobvu hwezvikamu hunoshanduka zvakanyanya, izvo zvinounza akateedzana emhando hurema sekuzadza kusagutsikana, kushanduka, shrinkage, weld mamaki, gobvu uye nhete kushushikana mamaki, nezvimwewo Naizvozvo, iyo rusvingo ukobvu hweiyo chaiyo epurasitiki zvikamu zvinofanirwa kunge zvakafanana sa zvinogoneka mukugadzirwa. Iko kuwanda shanduko hakufanirwe kunge kwakanyanya kukura, uye mutsetse kana arc shanduko inofanirwa kuitwa mukuchinja.
B. teerera kuenderana pakati pezvikamu uye gadzira yakakodzera saizi chaiyo zvinodiwa. Kuti uve nechokwadi chekuchinjana pakati pezvikamu, isu tinowanzo kupa zvakanyanya kuomarara kwekurongeka kwezvimwe zvikamu. Asi kune epurasitiki zvikamu, ine kumwe kuchinjika uye kusimba. Dzimwe nguva, sekureba sekunge dhizaini inonzwisisika, kutsauka kunogona kugadziriswa nekudyidzana pakati pezvikamu, saka iyo chaiyo mwero inogona kurerukirwa nenzira kwayo kudzikisira kunetseka kwekugadzira. Degree.
C. kusarudzwa kwemidziyo Kune akawanda marudzi epurasitiki zvigadzirwa, uye mashandiro avo anosiyana zvakanyanya. Kune chaiwo epurasitiki zvikamu, zvishandiso zvine diki shrinkage / deformation / yakanaka yemhando kugadzikana / yakanaka mamiriro ekunze kuramba zvinosarudzwa zvinoenderana nezvinodiwa zvekushandisa. (a) ABS / PC ine yakaderera shrinkage inoshandiswa kutsiva PP ine yakakwira shrinkage, uye PVC / HDPE / LDPE ine yakaderera shrinkage. ABS + GF inoshandiswa kutsiva ABS.PC + GF nePC. (b) Sarudza PA66 + GF kana PA6 + GF pane POM kana PA66 nePA6.
D. nyatsofungisisa kuumbwa kwacho.
(a) Kune akajairika ukobvu goko, bhokisi kana disc zvikamu, zvirinani kugadzira microstrip arc pamusoro uye kusimbisa pane zvemukati kudzivirira deformation.
(b) Kune akanyanya-matete mativi, ukobvu hwenzvimbo dzinofanirwa kunge dzakafanana, uye zvemukati zvikamu hazvifanirwe kunge zvine zvakadzika zvinosimbisa mbabvu kana zvimiro zvakaoma. Inokurudzirwa kushandisa yakakwira-inomhanya jekiseni kuumbwa muchina.
(c) Pombi dzinopisa kana dzinopisa mumhanyi mhodzi dzinoshandiswa kumativi akakura kuwedzera nguva yekuzadza uye kudzikisira kuumba kusagadzikana uye deformation.
(d) yezvikamu zviviri-zvezvinhu zvakagadzirwa nezvinhu zviviri, jekiseni repaviri pairi panzvimbo pejekiseni yeglue inogamuchirwa.
(e) yakamira jekiseni kuumbwa inokurudzirwa kune zvikamu zvine diki simbi inoisa.
E. Ane nzvimbo yekuvandudza. Mukugadzirwa kwezvakanaka zvikamu zvepurasitiki, zvakakosha kuti zviongorore kukanganisa kunogona kuitika mukugadzirwa kwemunguva yemberi.
(3) Dhizaini yekuongorora
Jekiseni anoumba ane kudhura, nguva yakareba uye kudhura kwekushandurwa, saka mushure mekutanga kwekupedzisa kwechikamu dhizaini, zvinodikanwa kuti uite masampuli epanyama kuti aongorore dhizaini, kuitira kuti uone zvine musoro zvechigadzirwa dhizaini parameter, uwane matambudziko nekuvandudza kufanoita.
Dhizaini yekusimbisa kwemuviri inowanzoitwa nekugadzira prototype modhi. Pane mhando mbiri kumumvuri kugadzira: CNC kugadzira uye 3D kudhinda.
Iko kushandiswa kwema prototypes kusimbisa kwemuviri kunoda kutarisisa kune anotevera maficha:
A.CNC prototype yekugadzira mitengo inowanzo kuve yakakwira kupfuura kudhinda kwe3D. Kune makuru zvikamu, mutengo weCCC kugadzirisa wakaderera.
Zvezvinhu uye zvemakanika zvivakwa kana pamusoro pekurapwa uye nezvinodiwa zveungano, CNC kugadzirisa inokurudzirwa, kuitira kuti simba remuchina riwanikwe. Kune zvidiki zvidiki uye zvakaderera simba zvikamu, 3-D kudhinda inoshandiswa. 3-D kudhinda inokurumidza, uye inodhura zvakanyanya kune zvidiki zvidimbu zvidimbu.
B. Prototypes inogona kazhinji kuongorora iyo gungano inoenderana pakati pezvikamu, kutarisa dhizaini dhizaini uye kusiira, uye kufambisa dhizaini dhizaini. Nekudaro, prototype haigone kuratidza hunyanzvi zvinodiwa zveforoma kuumba, senge kuumba dhizaini kona / shrinkage / deformation / fusion mutsara zvichingodaro
2. chaiyo epurasitiki zvikamu kuumbwa
(1) mapurasitiki muforoma dhizaini (chakuumbwa dhizaini) Yemhando yepamusoro mafomu ndiyo kiyi yekugadzira zvikamu zvakanyatsojeka. Mapoinzi anotevera anoda kuteverwa.
A. nenzira kwayo sarudza shrinkage coefficient yepurasitiki zvinhu. Nzvimbo inonzwisisika yezvikamu muforoma.
B. chakuvhuvhu musimboti zvinhu zvichave zvakasarudzwa simbi yesimbi ine yakanaka kugadzikana / kupfeka kuramba / ngura kuramba.
C. muforoma kudyisa sisitimu inoshandisa inopisa Tsui kana anopisa mumhanyi kusvika pazvinogoneka, kuitira kuti zvikamu zveimwe neimwe chikamu chekushisa kufanana, kudzikisira deformation.
D. muforoma inofanirwa kuve neakanaka kutonhora sisitimu yekuona kuti zvikamu zvakatonhodzwa zvakaenzana munguva pfupi.
E. chakuvhuvhu chinofanira kuva nedivi rekiyi uye nezvimwe zvekumisikidza michina.
F. zvine musoro isa iyo ejection chinzvimbo che ejector mashandiro, kuitira kuti simba rekubvisa zvikamu zvive yunifomu uye zvisina kuremara.
Mould dhizaini uye ongororo yakakosha chishandiso (moldfow): Uchishandisa iyo yekufananidza software yejekiseni kuumba kutevedzera maitiro ejekiseni kuumbwa kwemaitiro pasi peakasiyana marongero parameter, tsvaga izvo zvakashata muchigadzirwa dhizaini uye chakuumbwa dhizaini pamberi, kugadzirisa uye kugadzirisa ivo, uye dzivisa zvikanganiso zvakakura mukugadzirwa kweforoma kusvika padanho rakakura, iro rinogona kuve nechokwadi chehunhu hwehuvhu uye kudzikisira iyo inotevera mutengo.
(2) ongorora muforoma.
Mari yeforoma yakapusa yakadzikira zvakanyanya kupfuura iya yekugadzira muforoma. For chaiwo jekiseni epurasitiki zvikamu, zvinodikanwa kugadzira yakapfava chakuvhuvhu kuongorora maumbirwo eforoma usati waita zvepamutemo kugadzirwa muforoma, kuti uwane parameter yekuvandudza dhizaini yehuvhu uye kuve nechokwadi chekubudirira kweiyo kugadzirwa muforoma.
(3) chakuvhuvhu kugadzira
Mahombekombe epamusoro emhando yepamusoro anofanirwa kuvezwa nemuchina unotevera chaiwo.
A. yepamusoro chaiyo CNC muchina chishandiso
B. girazi rinopenya muchina
C. inononoka waya kucheka
D. inogara tembiricha inoshanda nharaunda
E. zvinodikanwa zvekuyedza michina. Uye zvakare, kugadzirwa kweforoma kunofanirwa kutevedzera maitiro akaomarara uye kuvimba nevashandi vepamusoro kuti vashande.
(4) jekiseni Kuumbwa muchina kusarudzwa
Zvishandiso zvejekiseni kuumbwa kwepamusoro chaiwo epurasitiki zvikamu.
A. inofanirwa kushandisa chaiyo jekiseni kuumbwa muchina isina makore anopfuura mashanu ehupenyu hwebasa.
B. fekitori nharaunda yakachena uye yakachena.
C. yezvikamu zvakasviba-zvakatetepa, panofanira kunge paine yakakurumidza-jekiseni jekiseni kuumbwa muchina.
D. kaviri kara kana isina mvura zvikamu zvinofanirwa kuve nemaviri mavara jekiseni kuumbwa michina
F. kurira kwemhando yehutano sisitimu
(5) kurongedza chaiyo mapurasitiki zvikamu
Kurongedza kwakanaka kwakakosha kudzivirira kukwenya, kuora, guruva mukutakura, kuchengetwa kwezvikamu zvepurasitiki.
A. yakakwira gloss zvikamu zvinofanirwa kunamirwa nefirimu yekudzivirira.
B. matete-akavakirirwa mativi anofanirwa kuputirwa muhomwe dzakasarudzika kana furo, kana kupatsanurwa nebepa banga kudzivisa kunetseka kwakananga.
C. Zvikamu zvinoda kutakurwa pamusoro penzvimbo refu hazvifanirwe kuiswa zvakasununguka mumakatoni. Akawanda makatoni anofanirwa kugadziriswa pamwechete nemastacks nevarindi.
Kambani yeMestech ine michina nemidziyo yekugadzira chaiyo mapurasitiki muforoma uye jekiseni kuumbwa kwekugadzira. Tinovimba kukupa chakuvhuvhu kugadzira uye kugadzirwa mabasa chaiwo mapurasitiki zvikamu.
Pashure: Hot mumhanyi muforoma
Zvadaro: Kuwedzeredza kwepurasitiki
Plastic Prototype Kugadzira
Prototype Plastiki Zvikamu
Prototype Plastic jekiseni richigadzirisa
Kumumvuri Plastic richigadzirisa